CIN Khabar संसदबारे कैलालीमा नागरिकको जिज्ञासा
सीआईएन बिहिबार, मंसिर १९, २०७६, १२:४५:००
धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको लम्की बहुमुखी क्याम्पसको प्राङ्गण । क्याम्पसका विद्यार्थी, शिक्षक, राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीयमाझ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुजबहादुर थापा ।
सहभागीहरूले उठाएका समस्या तथा सवालमा जवाफ दिदै सभामुख थापाले 'जनतासँग सभामुख' कार्यक्रमले जनताका सवालबारे प्रदेश सरकारको ध्यानार्कषण गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यो जनतासँग सभामुख कार्यक्रम झलक थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक आयोजना भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश सभा र यसका कामकारबाही, सभामुखको भूमिका र दायित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखे ।
कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, एक वर्षअघि घोषणा भएको राजधानी निर्माण भइरहेको विलम्ब, छाउपडी प्रथाको समाप्तीका लागि आवश्यक कानुनलगायतका विषयमा जिज्ञासा प्रस्तुत गरे ।
प्रदेशसभालाई आम नागरिकका जनजीविकादेखि हरेक चासो र सरोकारका सवालहरूमा छलफल हुने तथा सरकारलाई अवगत गराउने प्रदेशको सर्वोच्च थलो मानिन्छ ।
संसद जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताका हरेक सवालमा सरकारको ध्यानर्कषण गराउने संस्था हो । मंगलबार लम्कीमा विद्यार्थीसहितका सहभागीहरूले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना चासो र सरोकार सभामुख समक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।
सभामुख थापाले प्रदेश सभा गठन भएदेखि हालसम्म संसदले गरेका कार्यबारे जानकारी गराउदै हालसम्म ३२ वटा विधेयक निर्माण भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सभाको संरचना र कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी सीता घर्तिमगरले सोध्नुभयो 'सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेका सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणको लागि प्रदेश सभाले के गर्दैछ ?' लम्की बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियू सभापति ललित जैशीको जिज्ञासा थियो– 'सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विषयमा प्रदेश सभाको धारणा के हो ?'
अर्का सहभागीले 'स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन बनाउन प्रदेश सभाले किन ढिाई गरिरहेको ?' भनेर प्रश्न गरे । सहभागी भूमिका उपाध्यायको प्रश्न थियो– 'अहिले पनि शिक्षामा किन लैंगिक समानता हुन सकेको छैन ?'
सहभागी कृष्ण उपाध्यायले 'भाषा, कला साहित्यका क्षेत्रमा प्रदेश सभाले कस्तो नीति, ऐन बनाउदैछ ?' भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । दीर्घा रावतले शिक्षा सम्बन्धी प्रदेश सभाले ऐन बनाउन ढिलाई भइरहेकोबारे प्रश्न गर्नुभयो ।
सभामुख थापाले मिडिया विधेयक निर्माण बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । उहाँले राजधानी निर्माणबारे सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छिट्टै काम अघि बढ्ने जवाफ दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य रतनबहादुर थापाले प्रदेश सरकार निरन्तर जनताका आकांक्षा तथा चाहना पुरा गर्ने तर्फउन्मुख भएको चर्चा गर्नुभएको थियो ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख टीकादेवी थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्याप्त रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्यको लागि आफू निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै पत्रकार चित्राङ्ग थापाले यस्ता कार्यक्रमले जनताका चासो र सरोकारबारे प्रदेश सभालाई जोड्ने अवसर सिर्जना गरेको चर्चा बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संसद सहयोग परियोजनाका संसद मामिला अधिकृत पार्वती कुमारी भण्डारीले प्रदेश सभा र जनताबीच संवादको संस्कृति बढाउन जनतासँग सभामुख कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको आयोजना युएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग तथा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबको संयोजनमा सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाले गरेको हो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर १९, २०७६, १२:४५:००